Rakotomena Juliette : asa fanasoavana ny fampianarana
Vehivavy mpanabe sady mpitantana sekoly no vahiny entin’ny Jejoo amin’ny mpamaky amin’izao toe-draharaha mampafana ny resaka fanabeazana eto amin’ny firenena izao.
Rtoa Rakotomena Juliette, mpampianatra ny taranja frantsay an-taonany maro teny amin’ny liseam-panjakana ary mpitantana ny sekoly tsy miankina eny Antanetibe Ivato no mifampizara aminao, manodidina ny tontolon’ny fanabeazana sy ireo fitakian’ny mpanabe misy eto amintsika amin’izao fotoana izao.
Jejoo : Mme Rakotomena Juliette, mpampianatra misotro ronono
Mme Rakotomena Juliette : Efa ho 5O taona latsaka kely no nisahana ny asa maha mpampianatra rtoa Juliette Rakotomena. Mbola vao 10 taona aho dia efa nampianatra ireo ankizikely sy mpiray tanàna tamiko tamin’izany. Rehefa nisondrotra kilasy ambonimbony aho dia nampianatra ireo ankizy nila izany. Taty aoriana, raha vao nahavita ny fianarako teny amin’ny sekoly ambony aho, dia nisafidy ny hanao ny asana mpampianatra ho anton-draharaha raikitra, ka hifantoka sy hanolo-tena feno ho amin’izany. Tsy mbola nanao asa ankoatra ny mpampianatra aho. Tao anatin’izay 50 taona latsaka izay dia nampianatra teny amin’ny sekolim-panjakana maro aho, hatrany amin’ny faritra. Ho an’ny teto an-drenivohitra dia singaniko ny LMA izay tsy nijanonako ho mpampianatra fotsiny, fa nahatafiditra ahy hatrany amin’ny hetsika ara-java-kanto sy sosialy, toy ny teatra teo anivon’ny ATALMA.
Jejoo : 50 taona nampianarana ianao, ny fahitanao ny fivoaran’ny fanabeazana eto amintsika ?
Mme Rakotomena Juliette: Tany amin’ny taona 1973 tany dia ny olana ara-pitaovana no tena nampijaly tamin’ny fampitana ny fampianarana. Tsy ampy ny fitaovana, tsy tsara ny foto-drafitrasa. Voatery ny mpampianatra no mamorona izay fitaovana ilainy sy ampiasainy, … fa ny mpianatra kosa anefa dia liam-pahaizana avokoa. Amin’izao taona 2018 izao kosa indray, sarotra ny mampita fahalalana amin’ny tanora noho ny fanatontoloana, fa eo ihany koa ny hoe, lasa kilalao ny fampitaovana. Tambazana fampitaovana ny sekoly sasany, hahazoana takalo na zavatra ambadika. Ankoatra ireo, lasa fitaovana sy tsy afa-bela amin’ny raharaha politika ny fampianarana. Adino tanteraka sady toa odian-tsy jerena ny hoe, manana zo hianatra ny ankizy, ka mila atao laharam-pamehana ny tontolon’ny fanabeazana.
Jejoo : Ny hevitrao àry manoloana an’izao fitakiana ataon’ny mpampianatra amin’ny sekolim-panjakana izao ?
Mme Rakotomena Juliette: Tena ara-drariny ny fitakian’ny mpampianatra am-perinasa ankehitriny. Voahosihosy ny hasina maha-pampianatra raha ireo zo takiany ankehitriny ireo, no tsy voaefa aminy. Ambany dia ambany ireo tambiny omena ny mpampianatra ary tena mampiseho tanteraka fa sahirana ny mpampianatra. Izany fahasahiranan’ny mpampianatra izany, no mahatonga ny ankamaroan’ireo miasa eny amin’ny sekolim-panjakana misakelika fampianarana eny amin’ny sekoly tsy miankina satria tena ambany ny zo atolotry ny fanjakana.
Jejoo : Olona toy ahoana no tokony hisahana izany asa maha mpampianatra izany ?
Mme Rakotomena Juliette: Olona mahatsapa tena fa tena nateraka ho mpampianatra, mahatsiaro fa manana fahaizana tokony ho zaraina. Ireo no fepetra fototra. Ary raha hampianatra amin’izao vaninandro izao indray dia miampy hoe, olona mahay mikirakira sy mahay infôrmatika ; olona manana “document” betsaka ary tia manavao izany ; ary ny fahatelo dia olona tia manao fiofanana, mba hahafahany manatevina hatrany ny efa ananany. Ho an’ny vehivavy te hampianatra dia mbola miampy ireo fepetra ireo : manana fon-dreny, mahay mitady vahaolana, ary vonona hanohana ireo ankizy raisiny, hampianarina. Raha te hanao mpampianatra dia mila mahatsiaro hoe manana fanomezam-pahasoavana amin’io asa io; mahazo fahafinaretana rehefa mampianatra ; mahay an’ilay asa sady tia izany.
Jejoo : Ny torohevitrao ho an’ireo mpampianatra ela nihetezana, te hanangana ny sekoliny
Mme Rakotomena Juliette: Tsy ny hahazo vola sy hitady tombony no atao an-tsaina, fa ny hanao asa fanasoavana. Tsy azo atao ny mitrosa, mamorona ny tsy misy, fa ny eo an-tanana no ampiasaina, ary ny saina no miketrika. Raha mbola tsy manana na inona na inona, dia manàna faharetana, ary manangona ho enti-manana, boky, antontan-taratasy… . Rehefa mijoro ny sekoly, aza araraotina ny mpanabe mampianatra ao amin’ny sekolinao satria izy ireo no mampiroborobo hahazoana ny vokatra tsara. Fitiavana an’ilay asa sy fananana an’ilay sekoly no atao lehibe, na vitsy aza ireo mpianatra ao. Averiko ihany, raha tsy manana vola eo am-pelatanana dia aleo aloha manangona satria asa tsy natao hahazoana tombony ny fampianarana fa asa manome fahafinaretana. Manodidina ny 400 eo ireo mpianatra tantanako eto amin’ny sekoly Crescendo Antanetibe Ivato amin’izao. 8 taona no niorenan’ny sekoly.
Isaorana rtoa Rakotomena Juliette, mpampianatra sady talen’ny sekoly tsy miankina Crescendo, Antanetibe Ivato, de la petite section aux terminales. Fifandraisana : 032 02 582 17